Resaka « Taxi be » ihany… – Malag@sy Miray
Raha tsiahivina vetivety ny niandohan’ny taxi be teto Antananarivo dia ireo minibus nantsoina hoe « Buxi » angamba no azo lazaina fa tena nisantatra izany. Taty aoriana moa dia feno minibus vita avy any Japon no tena nanao ny ankamaroan’ny asa fitaterana ary amin’izao fotoana dia niampy ireo fiara Mercedes avy any Alemana izany. Iaraha-mahalala sy iaraha-miaina isan’andro izany.
Nisy ihany koa ny fanajariana natao ho an’ireo toeram-piantsonana toy izay natao ho an’ny zotra 119 mampitohy an’Ankatso sy 67ha. Nahazoana famatsiam-bola, hono ireny, saingy izao, tsy miova ny fitondran-tenan’ireo mpamily sy mpandray vola. Nisy ny ezaka nataon’ny kôperativa amin’ny nanisiana ireo mpandridra anaty na hoe « cadenceur » izay mitantana ny fijanonana, fampandrosoana na ny fandefasana ny fiara izay miantsona amin’ireny toerana natokana ho amin’izany ireny. Fa mbola tazanao ihany ireo mpamily tsy dia miraharaha loatra an’izy ireny. Satria angamba mety olona tamin’izy ireo ihany no nantsoina ka tsy atahorana na tsy misy lanjany aminy.
Fa dia maro izy ireto amin’izao fotoana. Raha mijery an’iny Anosy iny na iny faritra Analamahitsy-Ambohitrarahaba iny na ihany koa ny valavan’Andraharo mipàka mankany Ambohimanarina iny, dia efa tsy mahataitra intsony ny mahit ireto taksi be am-polony maro mitandahatra mitanjozotra mora manaraka ny onjan’ny fifamoivoizana. Raha sainina an-tsaina ohatra dia ao anatinan’ny zato metatra raha misy fiara roapolo dia farafahakeliny folo na dimy ambin’ny folo amin’ireo no taksi be mifanarakaraka amin’ireo toerana voalaza tetsy ambony izany.
Mbola hitombo ary hihabetsaka hatrany anefa izy ireny satria misy ireo tompom-piara taloha no te hanampy na hanolo ny azy ka tsapa fa nihamaro ireo « Sprinter Mercedes » amidy etsy Andranobevava sy Anosy ary Analakely. Rehefa nanotaniana ireo mpivarotra dia fantatra fa eo anelanelan’ny Ariary 24 tapitrisa ka hatramin’ny Ariary 36 tapitrisa no vidin’ireto fiara fanaovana fitanterana ireto. Misy ny mbola vy ny varavarankely ary misy kosa ny efa vaky fa fitatra no eo. Misy ny fohy ary misy ny lava. Ka arakaraka izay sy ny hatsarany. Ho an’ny « minibus » kosa indray rehefa nojerena ny teny ambany tetezan’ny Behoririka sy ny eny Antetezanafovoany dia eo anelanelan’ny Ariary 14 tapitrisa ka hatramin’ny Ariary 32 tapitrisa no ahafahana mividy izany arakarak’izay hoe misy fitaratra na tsia izay.
Somary mahatsikaiky ihany moa ny fomba famarotan’ireto tompom-piara satria dia malaza amin’izao ny fametahana anaran’orinasa allemàna mba hitenenana fa tena tsara ny fiara satria avy any Allemàna. Efa betsaka mantsy izao no mpanamboatra ireto « autocollant » atao amin’ny fiara izay nahazatra ny nahita azy ireny tamin’ny fiara « tuning ». Rehefa jerena akaiky ny laharan’ny fiara dia misy « 974 » izany hoe avy etsy amin’ny nosy La Réunion izany nefa ny soratra amin’ny vatany dia teny alemàna sy laharana an-tariby allemàna. Toraka izany ihany koa dia mbola soratra amin’ny teny allemàna ihany koa saingy tao familiana amin’ny ankavanana na « conduite à droite » ilay fiara izany hoe na avy any Hong Kong na Japon na firenena hafa ankoatran’i Frantsa sy Allemana ary Belzika.
Eo amin’ny fametrahana ny laharan’ny fiara ihany koa dia misy zavatra mahatsikaiky satria ny laharana avy any hong Kong (litera roa arahina isa efatra) nefa misy ilay soratra « F » amin’ny takelaka mangamanga kely manambara fa avy any Frantsa, hono izany, ny fiara. Na ihany koa litera « B » ne « D » izay midika fa avy any Belzika na Allemàna. Misy kosa ireo manisy takelaka fotsy ka ampitovitoviana amin’ny takelaka avy any Soissy na Allemàna saingy « 974 » kosa indray ilay laharana. Mahavariana, mahatsikaiky.
Fantatra mantsy izany izao fa dia ny fiara avy any Soissy sy Allemàna na ireo firenena Eropeana tandrefana no safidy voalohan’ny mpanjifa dia avy eo vao ny avy any Hong Kong na Japon raha voavadika tsara ny familiana, dia avy eo ny fiara avy ao Frantsa izay voalaza fa ratsy kokoa raha oharina amin’ny avy any Soissy na Allemàna raha taona mitovy. Ny farany moa dia ny avy etsy La Réunion. Ka mety noho izay filaharana izay izany no mahatonga ny fametahana « autocollant » misy orinasa Allemàna na ihany koa ny fanamboaramboarana ny fametrahana ny laharan’ny fiara. Fomba fmarotana daholo moa izany saingy mety ahitana taratra fitaka ihany na izay antsoina hoe « dol » amin’ny fiteny azy ka tsara mailo ihany izay mividy fa tsy manao avy any amin’ny tanàna be vola tsy mahalala na inona na inona.
Sipirintera moa izany ny fiantsoan-dry zalahy an’ireto « Sprinter Mercedes » ireto izay misy milaza fa manana motera « TDI » na dia iaraha-mahita eo aza fa « CDI » no soratra mivandravandra eo. Tsara ihany angamba ny mijery ny fari-pahaizan’ny mpamily sy ny mpanampy azy vao alaina miasa izy ireny na omen’ny fanjakana fahazoan-dàlana hamily. Satria ao amin’ny fanabeazana sy ny toe-tsaina mihitsy no mila harenina.
Aleo manontanitany foana toy izay manaonao foana e!
Taxi be ihany
10 juin 2011 à 9:48
Mbola taxi be ihany mb hanontany ny vidiny bon aucassion anakiray azany d vidin 1 vaovao de karazana tomabile inona le izy d aiza ny toerana mety ahitana azy.mety alo tsikelikely ve?merci